स्वस्थ, स्फूर्ति र ताजापनका लागि जरुरी ६ हर्मोन, कसरी बढाउने ? – Everest News Nepal
स्वस्थ, स्फूर्ति र ताजापनका लागि जरुरी ६ हर्मोन, कसरी बढाउने ?
June 14, 2020 Everest News स्वस्थ्य 0
महिलामा ओएस्ट्रोजन एक महत्वपूर्ण हर्मोन हो, किनभने उनीहरुको शरीरलाई पुरुषभन्दा भिन्न रुपमा विकास गर्न पनि यही हर्मोनले काम गर्छ । त्यही कारण जुन महिलामा ओएस्ट्रोजन हर्मोन कम हुन्छ, उनको हड्डी, मांसपेशी आदि कमजोर हुन्छ । मुटु लगायतको समस्या देखिन्छ । हामीलाई खुसी तुल्याउने हर्मोन्स जस्तो कि, सेरोटोनिन र डोपामाइनलाई पनि यस हर्मोनले प्रभावित बनाउँछ«ोजन हर्मोन कम हुन्छ, उनको हड्डी, मांसपेशी आदि कमजोर हुन्छ । मुटु लगायतको समस्या देखिन्छ । हामीलाई खुसी तुल्याउने हर्मोन्स जस्तो कि, सेरोटोनिन र डोपामाइनलाई पनि यस हर्मोनले प्रभावित बनाउँछ ।
स्नातक तह दोस्रो बर्षको नतिजा प्रकाशित
हर्षको फोकुल कुलो आयोजना, अनियमितताले छताछुल्ला ।